के हो अट्वारी ? कसरी मनाइन्छ? - DURBAR TIMES
HomeCulture & Religionके हो अट्वारी ? कसरी मनाइन्छ?
अट्वारी पश्चिममा थारु जातिले मनाउने एउटा महत्वपूर्ण सामाजिक र साँस्कृतिक परम्परा बोकेको पर्व हो । आइतबारको दिन मनाउने भएकाले यसको नाम अट्वारी रहन गएको हो । यो पर्व कृष्ण जन्माष्टमी पछिको दोस्रो हप्ताको आइतबारको दिन मनाइने प्रचलन परापूर्व कालदेखि रहेको छ । जस अनुसार यो बर्ष भाद्र ७ गते यो पर्व परेको छ । यो पर्व खास गरेर पुरुषले मनाउने चलन रहेता पनि महिलाहरु पनि व्रत बसेर अट्वारी रहने गर्दछन् । अट्वारीमा महाभारतका पात्र भिवाँ (भीम) को पूजा गर्ने गरिन्छ । थारु समुदायको बर्किमार ग्रन्थमा भीमको बिशेष भूमिका उल्लेख छ ।
अट्वारी कसरी मनाइन थालियो भन्ने सम्बन्धमा केही किम्बदन्तीहरु रहेका छन् । “भीवाँ आइतबारको दिन दानबको आहार भएका थिए र त्यही दानबलाई मारेर नयाँ जीवन पाएका थिए । यसैगरी बनबास गएको बेलामा कयौं बिपत्तिहरुबाट सबै भाईलाई बचाएका थिए । जस्तो उनले हात्तीसँग लडेर हात्तीलाई मारे, साथै पाँच पाण्डवहरुलाई लाखको घरमा आगो लगाएर मार्ने बेलामा मणिकको खम्बा उखेलेर सबैलाई बचाएका थिए । यसका साथै उर्बशी मेनकाको प्राप्तिका लागि छैठौं शताब्दीमा स्वर्गका राजा इन्द्र र थारु राजा दंगीशरण बिच युद्ध हुँदा दंगीशरण थारुले पाँच पाण्डवहरुसँग सहयोग माग्न जाँदा अन्य भाईहरुभन्दा भीमले सहयोग गरेको भनाई समेत रहेको छ । सोहीबेला भीवाँ रोटी पकाई रहेका थिए र रोटी पकाउँदा पकाउँदै लडाईमा जानु परेकाले रोटी एकातिरबाट मात्र पाक्यो । तसर्थ अट्वारीमा पनि पहिलो रोटी नपल्टाईकन एकातिरबाट मात्र पकाई सो भाग भीवाँको लागि राखिने चलन छ ।” (चन्द्र प्रसाद थारु, हमार रीति हमार संस्कृति २०६४) ।
अट्वारी मनाउने तरीका
अट्वारीको परिकार खानुभन्दा पहिले आफ्नो दिदी बहिनीको लागि परिकारबाट केही भाग निकाल्ने र आगोको पूजा गरिसकेपछि मात्र खाने गरिन्छ ।
अट्वारीको पहिलो दिनभन्दा अगाडिको रातमा भिन्सर्या (दर भात) खाने गरिन्छ । पहिलो दिन (आइतबार) दिउँसोको करिब २ बजेदेखि रोटी पकाउन शुरु गरिन्छ । रोटी पकाउनका लागि शुद्ध आगो (गन्यारी भन्ने काठ एक आपसमा रगडेर आगो निकालिन्छ) को प्रयोग गरिन्छ । यस किसिमको आगो नफुकेरै सकेसम्म माघी पर्वसम्म जोगाई राख्ने चलन छ । दिनभरिको व्रतपछि साँझको पाँच बजेपछि अट्वारीको परिकार खानुभन्दा पहिले आफ्नो दिदी बहिनीको लागि परिकारबाट केही भाग निकाल्ने र आगोको पूजा गरिसकेपछि मात्र खाने गरिन्छ । सो परिकारहरुमा रोटी, केरा, अम्बा, काँक्रो तथा आवश्यकता अनुसारका फलफुल र दही हुने गर्दछ ।
अट्वारीको भोलिपल्ट बिहान नुहाएर खाना पकाउन शुरु गरिन्छ । खानाको परिकारहरुमा पवँईको साग, सिल्टुंगको गेडा, केराऊ, तोरैं, कर्कलाको साग, रायोको साग तथा आवश्यकता अनुसार ३, ५ या ७ प्रकारको तरकारी बनाइन्छ । खाना तयार भएपछि सबै दाईभाईले आफ्नो चेलीबेटीको लागि अग्रासनका लागि आफ्नो अंशबाट केही भाग निकालेर मात्र खाने गर्दछन् । खाना खाई सकेपछि सोही दिन (सोमबार) विवाह भैसकेको दिदी बहिनीको घरमा अग्रासन दिन जाने परम्परा रहेको छ ।
थारु समुदायकोे महाकाव्य बर्किमार (महाभारत काव्य) मा भिमसेनलाई मुख्य पात्रको रुपमा लिइएको छ । जसमा अर्जुनले नभई भिमले बाणले चरा खसाई द्रौपतीलाई जित्ने गर्दछन् । बर्किमारको राउबेढक पैढारमा यसरी भनिएको छ–
चारी भाई भिवाँ पाछु र छोर, चारी परगा भिवाँ अगसुर नेंग
फल एक मयरी डरनु पा, अज्ञीया डेब्या डरटु खा
राउबेढ डुर्पटी लईआन, ज्याकर नाउँ धनरजी हो ।
– (अशोक थारु, २०५६, बर्किमार (राउबेढक पैढार)
अट्वारी पर्व थारु जातिमा पुरुषले मनाउने र दिदीबहिनीलाई अग्रासन दिइने अत्यन्त महत्व रहेको पर्व हो । यो पर्व एकता र बिजय तथा भातृत्वप्रेमको प्रतिकको रुपमा मनाइने गरिन्छ । साथै अट्वारी पर्व बल र सुरक्षाको रुपमा पनि मनाइने गरिन्छ ।
यो जानकारी विभिन्न लेख, खबर तथा कृतिहरुबाट जानकारी लीइ तयार पारीएको हो । तपाईंको कुनै लेख तथा विचारहरु छन् भने हामीलाई durbartimes@gmail.com मा पठाउन सक्नु हुन्छ।
Previous articleसुदूरपश्चिममा सार्वजनिक बिदा
Next articleदमकमा भदौ १३ गतेसम्म लकडाउन लम्बियो
रेलवेकाे मुआब्जामा चित्त नबुझेको भन्दै जग्गाधनीद्वारा उजुरी
डिजिटल स्क्रिन भएकाे अप्रिलिया एसआर १६० सार्वजनिक हुदैँ
रत्नपार्कमा बसेर सामान बाँडे जसरी ह्वारह्वार पदक वितरण गरिएको : ओली
आज खड्काले परराष्ट्रमन्त्रीकाे शपथ लिँदै, आजै अमेरिका उड्ने
नेपाल टेलिकमको संविधान दिवस अफर
एमाले सांसदको अवरोधका बीच संसद् बैठक सुरु
सरकारको गैरकानूनी कामको विराेध गर्नुपर्छ : के.पी ओली
बैंगलोरको कप्तानबाट पनि विराटले राजीनामा दिने